चर्चित लेखिका तसलिमा नसरिनले प्रियंका चोपडालाई रेडिमेड बच्चाकी आमा भनेपछि मच्चियो हंगामा – OSNepal
चर्चित लेखिका तसलिमा नसरिनले प्रियंका चोपडालाई रेडिमेड बच्चाकी आमा भनेपछि मच्चियो हंगामा
Loknath Rijal (Jhapa) January 23, 2022 0
ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपडाले यसपाली सबैलाई ठुलै सरप्राइज दिएकी छिन् । किनकि कसैले सुइको पनि नपाईकन उनी आमा बनेकि छिन् । तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ उनले गर्भधारण गरेरभने बच्चाको आमा भएकी हैनन्् । उनले आफु सरोगेसीमार्फत् आमा बनेको खबर सबैलाई दिएकी हुन् । उनको यो जानकारीले सबै फ्यानलाई अचम्मित मात्र पारेन् खुशी पनि दियो ।
तर यहि कुरा कसैको लागि भने टाउको दुःखाइएको बिषय बनेको छ । यसरी टाउको दुखाउनेमा भारतकी चलेकी लेखिका तसलिमा नसरिन हुन् । उनले पनि यसबारे ट्वीट गरेकी छिन् । तसलिमाले आफ्नो ट्वीटमा सरोगेसीमार्फत् जन्मिने बच्चालाई रेडिमेड बेबी बताएकी छिन् । प्रियंकाले आफू सरोगेसीमार्फत् आमा बनेको कुरा सार्वजनिक भएपछि तसलिमाले यसबारे आफ्नो कटु बचनपुर्ण धारणा राखेकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘सरोगेसीमार्फत् रेडिमेड बच्चा पाउने आमाले कस्तो महसुस गछिन् होला ?
उनले प्रियंका लाई लक्षित गर्दै लेखेकि छिन् के उनलाई ती बच्चाप्रति त्यस्तै महसुस हुन्छ जुन एक आमाले आफ्नो बच्चा जन्माएपछि महसुस गर्छिन् ? धेरै जसोले उनको यो टिप्पणी प्रति बिरोध जनाएका छन् भने केहीले समर्थन समेत गरेका छन् ।
छोरी जान्हवीलाई डाक्टर बनाउन चाहाना अधुरै रह्यो आमा श्रीदेवीको
चलचित्र ‘कबीर सिंह’को सिक्वेलको तयारी, के फेरी फिल्ममा खेल्ने मौका पाउँलान त शाहिद कपुरले ?
मनका निकै धनि छन् बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार,आंगनवाड़ी विद्यालयका लागि दिए १ करोड दान
‘कभी इद कभी दिवाली’मा पूजा हेगडेको इन्ट्रि
‘राज्यले लामो समय अध्ययन गरी निर्माण शुरू गरिसकेको आयोजना रोक्नु राष्ट्रहित माथि घात गर्ने गैर जिम्मेवार निर्णय’
झापामा दुई स्वतन्त्र उम्मेदवारको मत शून्य !
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले खर्च कटौती गर्ने
मधेस प्रदेशमा माओवादी : २१ सिटबाट ९ मा झर्‍यो, ९९ एकल उम्मेदावारी दिँदा ७ मा मात्र विजयी